In ka badan 50 nooc oo ah xisaabinta. Xisaabinta aasaaska strip ah, size ka mid ah qoryo, jaranjaro alwaax. Dhisidda calculator ah.
Xisaabtaan ee qalabka dhismaha, calculators dhismaha, iyo samaynta
Foundations la taaban karo
Deedadka, derbiyada, sagxadda
Buugaag iyo awoodda
Ku socoshada dhismaha guriga jir ah waxaan ahay si joogto wajahay la xisaabiyo qadarka qalabka dhismaha ama xisaabin size of design qayb ka mid ah.
Goynta guddiga, alwaax ama alwaax kale ee shaqada dhismaha - sida loogu baahan yahay derbiyada ama lagu tumo?
Kululeeyayaasha sidoo kale u baahan tahay xisaab joogto ah. Dardaaranka dhogor macdanta this, xumbo ama ningax kale. Sida aan ku qoray, design aan qalabka lafaha guriga iyo ningax waxaan u isticmaali for madhxiya, ma aha oo kaliya lagu tumo iyo saqafka, iyo derbiyadiisii.
Saqafka - sheeko kale. Saqafka of muuqaalo adag reerka, iyo xisaabiyo qadarka shingles bir ama qalabka kale ee saqafka waa ay adag tahay. Oo haddana waxaa lagama maarmaan ah in ay qaataan galay qashinka account in saqafka. Oo waxaa jira mid guri dhowr sano la saqafka ka mid ah waxyaabaha saqafka.
xilli ciyaareedka soo socda soo food doonaa derbiyada. Sidoo kale wuxuu isu tixgeliyo xaglineeyso, ooday uumiga ...
Qof aqoon u leh koorsada aljabra dugsiga, xisaabinta, kuwaas ma noqon doonto adag. Qaado warqad iyo calculator ah, xusuuso formula ah, hubi laba jeer ... Oo hubi ... Si looga fogaado food qaladka ben kharashka loo baahnayn in xisaabinta. On gaadiidka, haddii aad leedahay wax ka badan si ay u iibsadaan, ama qeybsanaan waqti badan, fududahay in shaqo ma aha mid aad u wanaagsan iyo wixii la mid ah.
Sidaas waxa uu ku dhashay fikradda noqotay kuwan xisaabinta caadiga ah ee saaran garbaha barnaamijyada in qof kasta ka fiirsan doonaa oo u dhowow sawir.
Oo ugu muhiimsan - ma qaladaad samayso! Ka dib oo dhan, kharashka failure waa mid aad u sareeya inta lagu jiro dhismaha.
Waxaan rajaynayaa in aan adeeg caawin doonaa kuwa dhisayaan guri gacmo iyo injineerada-dhisaa uu.